Azafady azafady azafady amiko ve ny hevitra momba ny fanekena ny lahatahiry?
Ny fandefasana boadaka dia teny iray izay mamaritra ny dingana lehibe fanatsarana izay misy fiantraikany goavana eo amin'ny sehatry ny tranokala. Amin'ny ankapobeny, dingana iray amin'ny fandefasana ny rohin'ny tranonkalanao ho hita amin'ny tari-dalana isan-karazany amin'ny aterineto. Tsy fotoan-tsarotra toy izany no eritreretinao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mamorona sy mandefa famaritana fohy miaraka amin'ny lohateny mitongilana izay mifanaraka amin'ny rohy rehetra mankany amin'ny lahatahiry. Samy tokony ho hita amin'ny botsearch ny teninao sy ny lohateninao. Ny tanjona voalohany amin'izany dia ny mividy rindrankajy avo lenta izay noforonina ho an'ny tranokalanao. Azonao atao ny mahazo marika be loatra sy tsara kalitao ekena amin'ny fametrahana fomba fandefasana backlink.
Ilaina ny famerenana backlinks avy amin'ny loharano azo antoka ho an'ny fahombiazan'ny fampielezan-tsindrim-peo fikarohana. Na dia izany aza, ny fanontaniana dia ny fomba hahazoana ny ranom-pifandraisana tsara amin'ny tranokalanao, ny fankatoavana ny toro-làlana fikarohana. Ny fanavaozana ny fananganana tranokala dia tsy afaka ny ho feno tanteraka na manam-pahaizana SEO izay miasa ao amin'ny tranokalanao. Ny backlinks dia manomboka amin'ny loharanom-baovao hafa sy ireo mpampiasa mivantana amin'ny tranokalanao. Na izany aza, miaraka amin'ireo mpanolo-tsaina SEO anao, afaka manapa-kevitra amin'ny zavatra hafa momba ny tranokalanao ianao.
Tena ilaina ny miara-miasa amin'ny tetikasa fanorenana rohy miaraka amin'ny mpandrindra tranonkala efa za-draharaha satria mety haka ny tombontsoa avy amin'ny rindran-damina izy ireo ary hitondra fifamoivoizana eo amin'ny tranokalanao. Tsy midika izany fa tsy hifehy ny tranokalanao ianao. Miantehitra fotsiny ny fizotran'ny fotoana fandaniam-potoana sy mandaitra amin'ny manam-pahaizana, ny lafiny hafa rehetra dia eo ambany fifehezanao.
Eo am-piandohan'ny fanentanana fananganana rohy, tsy maintsy hahita ny toerana ahafahanao mahazo backlinks kalitao ianao. Misy fitaovana amin'ny aterineto sasany mety hanampy anao amin'ny fikarohanao. Avy amin'ny fitaovana ankafizinao indrindra dia azonao ampiasaina amin'ny fanentanana fananganana rohy ny Semalt Web Analyzer, Ahrefs, ary Moz. Raha vao mifidy rindrambaiko mety aminao ianao, dia mila miditra ao amin'ny tranonkalan'ny teny fototra na fehezanteny. Ny rindrambaiko dia hanome anao sehatra samihafa ahafahanao mamoaka lahatsoratra, fanehoan-kevitra na lahatsoratra amin'ny blaoginao miaraka amin'ny backlinks izay mifantoka amin'ny tranokalanao.
Raha vantany vao mahazo lisitry ny tranokala ahafahanao mametraka ny backlinks ianao dia tokony hamerina hijery ny loharano tsirairay ary hametraka ny votoatiny amin'ny alàlan'ny piraofilinao amin'ny findainao tsara indrindra. Ilainao ny manamarina ny habetsaky ny tranonkala iray ho an'ny tsenan'ny varinao ary ny rindran-damina napetraka eo amboniny. Esorio ireo tranonkala manana fahefana ambany izay mamoaka votoaty tsy ara-dalàna na fako ao amin'ny pejiny.
Misy fitaovana an-tserasera sasantsasany afaka manome anao backlinks malalaka. Amin'ny ankapobeny, manolotra fahafaha-manao tahaka izany izy ireo raha mila ny votoatiny tsara amin'ny sehatr'izy ireo. Noho izany, afaka mametraka ny votoatinao maimaim-poana ianao ary mamorona fifandraisana mafana amin'ny mpivarotra amoron-tsena misy anao. Mba hahazoana antoka fa hikirakira ny rindran-damba misy anao, mamorona lahatsoratra vaovao sy mailaka izay hahaliana ny mpanjifanao mety aminao Source .